"Kwiintaba zempambano." I-cosmic eyoyikisayo evela kuLovecraft. | Uncwadi lwangoku
"Kwiintaba zempambano." I-cosmic eyoyikisayo evela eLovecraft.
M. Ukhwekhwe | | Uloyiko
Ioyile nguNicholas Roerich, omnye wabaninzi abaphefumlelweyo Kwiintaba zempambano.
Kuyamangalisa ukuba umbhali wenqanaba le HP Uthando wasweleka yedwa kwaye ehlwempuzekile, nangona enyanisweni kuyidrama eqhelekileyo kunokuba kubonakala ngathi. Akukho mntu ungumprofeti kwilizwe lakhe okanye, njengoko kunjalo, ngexesha lakhe. Njengokuba uLovecraft ngokwakhe watsho ebomini ukuba "umnumzana akazami ukuzazisa, uyishiya kubantu abazithandayo nabangabalulekanga," kuyacaca ukuba wayekhohlisile. Imigaqo yokuziphatha engqongqo (okanye ukunqwenela okungafunekiyo, ngokutsho kwabanye ababhali bezinto eziphilayo) kuyithintele ekubeni ibe yimpumelelo kwezorhwebo. Ngelixa imbeko yakhe, ixesha esele liphelelwe lixesha kwanasekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX, liyancomeka. Ngokwamazwi ombhali ongumFrentshi uMichel Houellebecq: "Kweli xesha lokurhweba ngobuqhetseba, kuyathuthuzela ukufumana umntu owala ngenkani 'ukuzithengisa'."
Yintoni na abagxeki bombhali weProvidence (phakathi kwabo esinokuthiya ngegama Ursula K. Le Guin) kufuneka bayamkele loo nto ubugcisa obunempembelelo kwizizukulwana ezilandelayo. Iintsomi zakhe zagqitha ipulp y komhlaba yonke indlela eya kwinkcubeko. Namhlanje uninzi loluntu luyazi, ubuncinci ngendlebe, Cthulhu kakhulu njengoBatman okanye uFrodo. Iintsika zembali kaLovecraft zanda ziye kwimisebenzi eyahlukileyo njengefilimu Umfokazi: umkhweli wesibhozo NguRidley Scott (1979), inoveli ebonakalayo Yonke imihla omangalisayo: Ukuphela kobukho ngu-SCA-JI (2010) okanye ingoma ezilahlekileyo in umkhenkce Iqela leRage (1993), elijonga kwakhona iziganeko zenoveli emfutshane Kwiintaba zempambano. Yiloo nto kanye lo msebenzi siza kuxoxa.
Inkangeleko yomhlaba yandikhumbuza ngandlel 'ithile ngemizobo engaqhelekanga nephazamisayo yaseAsia eyenziwe nguNicholas Roerich, kunye neenkcazo ezingaqhelekanga neziphazamisayo zethafa elimnandi nelintle leLeng elivela' kwiNecronomicon 'eyoyikisayo, ngu-Arab Abdul Alhazred. Emva kwexesha ndaye ndaziva ndibuhlungu ngokufunda le ncwadi imangalisayo kwithala leencwadi laseyunivesithi.
Lovecraft uphethwe yimeko enqabileyo ye iqeqswe (ukungakwazi ukulawula ubushushu bomzimba ngokuzimeleyo kumaqondo obushushu ashushu), okumenze ukuba azive egula kakhulu kumaqondo angaphantsi kwama-20º, ngakumbi esiphelweni sobomi bakhe. Ngesi sizathu, kuyamangalisa ukuba elinye lawona mabali akhe amnandi asetelwe e-Antarctica, ngokungathi elo lizwekazi lishiywe sisandla sikaThixo simenze wanomdla.
Uqweqwe lohlelo lweCátedra de Kwiintaba zempambano.
Impikiswano ye Kwiintaba zempambano Umgaqo ulula: ijioloji UWilliam Dyer uxelela umntu wokuqala uhambo lwakhe neqela leenzululwazi e-Antarctica, kunye nezoyikekayo ezingathethekiyo abazifumanayo esixekweni, ezilahlekileyo emkhenkceni, ezingafanelanga ukubakho. Inoveli iphefumlelwe ngokukhululekileyo Ingxelo ka-Arthur Gordon PymnguEdgar Allan Poe. Akukho ncoko yababini phakathi kwamaphepha ayo, mhlawumbi ngenxa yesigqibo sobuhle, okanye ngenxa yokuba umbhali ngokwakhe wayeyazi ukuba akakwazi ukubhala iincoko ezizizo (njengoko uStephen King esitsho kwisincoko sakhe. Ngelixa ndibhalayo). Ngayiphi na imeko, uLovecraft usebenzisa abantu njengamaqhekeza nje ukubalisa ibali elidala kakhulu, kwaye loyike ngakumbi kunoluntu ngokwalo.
Igazi lakhe lihamba ngemithambo yam
Amaphiko, nangona kunjalo, anyanzelisa imeko yayo yomoya. […] Kwakungenakwenzeka ukuba ndikhumbule iLake ngeentsomi malunga naBantu baMandulo ababephuma ezinkwenkwezini benza ubomi basemhlabeni ngokuqhula okanye ngempazamo, kunye namabali aphambeneyo ngabantu bendalo abavela ngaphandle ababehlala ezintabeni, Ithethwe ngomnye umntu wasentsomini ovela kwiSebe leMiskatonic loNcwadi lwesiNgesi.
Incwadi ayisiyontsomi eyoyikisayo, ngesimbo sesiko lamaGoth leziporho nezithunzela, kodwa ibali Uloyiko kwindalo iphela ephonononga indlela esingabalulekanga ngayo embindini wendalo iphela. Ukoyikisa Kwiintaba zempambano kuyimbonakalo yayo njengengxelo yesayensi enomdla ("umkhenkce ebekwi-latitude ye-86º 7" kunye ne-174- 23 "ubude bempuma" okanye "iphiramidi yayiyi-15 m ukuphakama nge-5 m ubude"). Njengokuba yenzekile. Ngokuxakayo, ukusetyenziswa kwenkqubo yeLovecraft yesigama sobugcisa kufezekisa ifuthe elinamandla kakhulu kwimibongo.
Ukungena nzulu kwimiba enonobumba, umbhali usebenzisa yonke into eqondwa njengeempazamo zabasaqalayo (ubuninzi bezichazi kunye nezihlomelo, ukusetyenziswa kwezichazi-magama zakudala okanye ezikude, njl.njl.), Azenzela zona kwaye ubhabha njengebhanile. Oku kwenza ukuba isicatshulwa sibene uphawu lokwahlulwa ngokugqibeleleyo, ngaphezulu kwenkcazo. KwiLovecraft, iitempile azikho Grandesokanye enkulu, ukuba akukho njalo cycopeope y dibanisa. Oko kuguqulela kuhlobo lwe-anachrony kunye nenyaniso echaphazela imeko yomfundi njengoko ibali liqhubeka.
Ninokuthetha ixesha elide malunga Kwiintaba zempambanoKodwa kwanele ukutsho ukuba lilitye lembombo le-XNUMX ye-sci-fi kunye noncwadi oloyikisayo. Uninzi lwezinto esizifundayo namhlanje zininzi kakhulu kule noveli. Ngokuqinisekileyo, kwikamva elingekude kuya kuba semlonyeni woluntu ngokubanzi, kuba umlawuli owaziwayo uGuillermo del Toro (ophumelele ii-Oscars ezininzi Ubume bamanziebesoloko edlala ngothando noluhlobo lwefilimu iminyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Uloyiko » "Kwiintaba zempambano." I-cosmic eyoyikisayo evela eLovecraft.